सफलाको चाबी जोखिम उठाउनु | प्रेरक संसार
सफलाको चाबी जोखिम उठाउनु
कायर हुनुहुन्छ ? हुनुहुन्न भने उठाउनुस् जोखिम यही सफलाको चाबी हो । थाहा छ ? - कार्टुननै नहेर्ने त्यो जमानामा वाल्ट डिज्नेले सर्वप्रथम कार्ट...
कायर हुनुहुन्छ ? हुनुहुन्न भने उठाउनुस् जोखिम यही सफलाको चाबी हो ।
- कार्टुननै नहेर्ने त्यो जमानामा वाल्ट डिज्नेले सर्वप्रथम कार्टुन चलचित्र निर्माण गर्ने जोखिम मोलेका थिए ।
- ग्रेटा गारवोले मनग्य पैसा दिने टोपी कम्पनीको काम छाडी फिल्म क्षेत्रमा संघर्ष गर्ने जोखिम मोलेकी थिइन् ।
- ब्रुसली ले एक सय बाह्र डलर बोकेर अमेरिका छिर्ने जोखिम मोलेका थिए ।
- जोफ वेजोसले मासिक हजारौ डलरको जागिर छोडेर अमेजन डट कमको सुरूवात गर्ने जोखिम मोलेका थिए ।
- वियर ग्रेल्सले ढाडको हड्डी भाचिए पनि सगरमाथा चढ्ने जोखिम मोलेका थिए ।
- ब्लेडले दारी काट्ने परिपाटी नभएको समयमा किंग सी जिलेटले भारी ऋण काढेर ब्लेड कम्पनी खोल्ने जोखिम मोलेका थिए ।
- सोइशिरो होण्डाले आफ्नै श्रिमतीको गहना बेची मोटरसाइकल कम्पनी खोज्ने जोखिम मोलेका थिए ।
- राइट दाजुभाइले सर्वप्रथम सवैथोक खर्चेर असंभव भनिने करङे जहाज उडाउने जोखिम मोलेका थिए ।
- मर्ने बाँच्नेको कुनै ठेगान नहुदा नहुदै क्रिष्टफोर कोलम्बसले अमेरिका खोज्ने जोखिम मोलेका थिए ।
- छारे रोगले ग्रस्त हुदा हुदै पनि अनी खुट्टा भाचिए पनि प्याटी विल्सनले ४०० माइल दौडने जोखिम मोलेको थिइन् ।
- तमाम चुनौतिका बाबजुद फ्रेड स्मिथले चौविस घण्टामा सामान डेलिभरी गर्ने फ्रेडरल एक्सप्रेस कम्पनी खोल्ने जोखिम मोलेका थिए ।
... जती पनि सफल भए ती सबैले कुनै न कुनै जोखिम मोलेका थिए । उनीहरू डरले थुनिएर बसेका थिएनन, जीवन सित जुवा खेल्ने हिम्मत गरेका थिए । उनीहरू पटक पटक असफल पनि भए तर अन्तमा सानदार जित हासिल गरेर विश्व हल्लाउन सफल भए । बुझिराखौ, जसले जोखिम उठाउदैन त्यही नै सबैभन्दा ठूलो जोखिममा पर्छ । चेतना भया !
प्रेरक संसार: सफलाको चाबी जोखिम उठाउनु